Nyaya dzaJessica Bruce Martech Zone »
Zvinyorwa na Jessica Bruce
Nguva Yokuverenga: 7 maminitsi Nzira yakanakisa yezvishandiso yekupa madhiri anoyevedza kune vatengi kucheka verevereri. Izvo zvishoma ndizvo zvinofamba-famba, zvishoma ndiyo mutengo wekutenga kune vatengi. Iko hakuna mhinduro iri nani yekuita izvi pane kubatana nevatengi kuburikidza neinternet. Iine vashandisi ve2.53 bhiriyoni vashandisi uye mamirioni emakomputa emunhu, uye mamirioni gumi nemaviri kusvika makumi maviri nemaviri eCommerce zvitoro, vatengi havachavimbe nezvitoro zvekutengesa zvekutengesa. Muchokwadi, iyo digital